'नेपाली फिल्मको लुक्स फेरिएको छ'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
'नेपाली फिल्मको लुक्स फेरिएको छ'
कार्तिक २१, २०७६ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — बलिउड अभिनेता गोविन्दाका लागि नेपाल पानी–पधेंरोजस्तै हो । उनी पशुपतिनाथ दर्शककै लागि पनि आइरहेका हुन्छन् । मंगलबारदेखि उनी काठमाडौंमा छन् । बिहीबारदेखि वीरगन्जमा सुरु हुने तीनदिने नेपाली स्वर्णिम चलचित्र महोत्सवका लागि उनलाई बोलाइएको हो । गत वर्ष पनि उनी सिने सर्कल अवार्डका लागि काठमाडौं आएका थिए ।
‘विवाह गर्नुअघि पनि म पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आइरहेको हुन्थें । अब त पत्नी सुनीताका कारण पनि नेपालसँग कनेक्सन बढेको छ । आफसेआफ खिच्छ,’ नेपाली चेली सुनीताका पति गोविन्दाले भने ।
सन् १९८६ मा ‘इल्जाम’ मार्फत् बलिउड छिरेका गोविन्दा पहिले डान्सर थिए । पछि एक्सन पनि गरे ।
कमेडी फिल्म गर्न थालेपछि भने उनी स्थापित नै भए । उनका वर्षमै १४/१५ वटा फिल्म रिलिज हुन्थे । सन् १९९९ मा बीबीसी न्युजले गरेको पोलमा गोविन्दा विश्वकै ‘ग्रेटेस्ट स्टार’ को उत्कृष्ट दसको सूचीमा समेत परे । ‘त्यो बेला जुन फिल्म मिल्छ, गर्दिन्थें । न विषयवस्तु हेर्थें, न कास्टिङ । तर तिनै फिल्म हिट भइदिन्थे,’ हँसिलो मुद्रामा प्रस्तुत भए ।
यी अभिनेताले पछिल्लो समय ‘भागम भाग’, ‘पार्टनर’ र ‘किल दिल’ जस्ता फिल्म गरेपछि भने जुन पायो त्यहीं फिल्म गर्न छोडिदिएको बताए । तर सँगसँगै उनले आफू बलिउडको ग्रुपिज्मको सिकार पनि भइरहेको तीतो पोखे । ‘बलिउडमा ग्रुपिज्म छ । म बलिउडका दुई समूहबाट बाहिरै छु । एउटा अमिताभ बच्चन ग्रुप र अर्को सलमान खान ग्रुप । अमिताभसँग त ‘बढे मियाँ छोटे मियाँ’ गरेपछि एकाध अन्तरवार्तामा बाहेक भेटेको पनि छैन । सलमानसँग पनि पछिल्लो फिल्म ‘पार्टनर’ गरेको ११ वर्ष भइसक्यो,’ गोविन्दाले फिल्म क्षेत्रमा बढी सोचेर काम गर्न थाल्यो भने काम नलाग्ने तर्क गर्दै थप्छन्, ‘तर सबैजना सोचेर नै ग्रुपिज्म गर्छन् ।’
त्यसो त उनले आफूलाई फिल्मको अफर आइरहेको जिकिर गर्दै अलि बढी विचार गरेर मात्रै गर्न थालेको र राम्रो नलागेका फिल्म नगरेको बताउँछन् । राजनीतिमा लागेर केही समय फिल्म क्षेत्रबाट ओझेल परेका गोविन्दाले ‘पार्टनर’ बाट जबरजस्त कमब्याक त गरे । तर पहिले जस्तो फेरि फिल्ममा देखिएनन् ।
‘यो सबै समयको खेल हो । फिल्म त मैले राम्रै छानेको थिएँ । मणिरत्नमको फिल्म खेल्न खोजेको थिएँ, तीन वर्ष ढिलो भइदियो । रवि चोपडाको फिल्म गरें, बन्द भयो । अष्टविनायकको गरें, रिलिज नै हुन सकेन । उद्योग यस्तो डरायो कि आखिर गोविन्दाका फिल्म किन बिक्दैनन् ?’ उनले बलिउडका केही ठूला कम्पनीले आफ्नो
काम बन्द गराइदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हुन पनि ती कम्पनीले सारा फिल्म किनें तर मेरा फिल्म किन्नै चाहेनन् । कतै ती कम्पनीका मालिकहरू मेरो काममा अवरोध त पुर्‍याइरहेका थिएनन् ?’
उनीहरूलाई अरू कसैसँग समस्या थिएन, केवल गोविन्दासँग समस्या थियो । ती व्यक्तिहरू एउटा गोविन्दाको पछाडि लाग्नुको कुनै कारण थिएन तैपनि गोविन्दाले आफू यस्तो फोहोरी राजनीतिमा पर्न नचाहेको जिकिर गर्दै भने, ‘मलाई एउटै सत्य थाहा छ, जहाँबाट तपाईं को समय सुरु हुन्छ, त्यहींबाट अच्छा समय सुरु हुन्छ । जब मेरो समय चल्छ, तिनको पनि केही लाग्नेवाला छैन । मसँग जुन समय छ, त्यही बेला असल काम गर्न सकूँ ।’
गोविन्दाले धेरै फिल्म खेलेका मात्रै छैनन्, एउटै फिल्ममा धेरै चरित्रसमेत निर्वाह गरेका छन् । आखिर यो सबै उनले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? सवालको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘एकपटक मैले दिमागमा यसरी काम गर्नेछु भनेर सोचेपछि कहिल्यै बिर्सदैनथें । पूरा दिन ४, ५ वटा फिल्मको सुटिङ पनि फटाफट सकिदिन्थें । हरेक चरित्र यसरी निर्वाह गर्थें कि सबै याद छ । सम्पादनमा कुनै सट देखिनँ भने पनि त्यो कहाँ गयो भनेर सोध्थें । मेरो सम्झने क्षमता देखेर अरू चकित पर्छन् ।’
कुनै बेलाका ‘स्टार’ को करिअरमा यतिबेला ग्रहण लागेजस्तो भएको छ । आरोह र अवरोह दुवै भोगेका उनलाई अहिले फ्रस्टेसन कत्तिको होला ? भन्छन्, ‘यदि ममीको आशीर्वाद र टाइम फ्याक्टरको आइडिया नहुँदो हो त सायद यो बेला ममा फ्रस्टेसन हुन्थ्यो होला । भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यो भएरै छोड्छ । नकारात्मक पक्षतर्फ नहेरी हामी आफ्नो लागि अझै इमानदारी साथ के राम्रो गर्न सक्छौं, मिहिनेत गर्न सक्छौं भनेर लाग्नु जरुरी हुन्छ । चल्ने त मेरो मिहिनेत हो । हावादारी कुरालाई म नजरअन्दाज गरिदिन्छु ।’
८० को दशकमा गोविन्दा डान्स र एक्सनमा थिए । ९० को दशकमा कमेडियनको छविमा जमे । तर उनी बलिउड भने लेखक बन्ने उद्देश्यले छिरेका रहेछन् । ‘हुन त म कलाकार भएँ । तर म यहाँ लेखक बन्न आएको थिएँ । आफू हिरो वा डान्सर हुन्छु होला भन्ने सोच नै थिइनँ । मेरा जति पनि हिट फिल्म छन्, ती सबैको सेकेन्ड हाफ मैले नै लेखेको हो । सबै भन्थे, यो गोविन्दाको फिल्म कसले लेख्छ ? यति धेरै हिट कहाँबाट आउँछ ?’
पटकथाकारले लेखिसकेपछि त्यसमा दम देखिएन भने गोविन्दाले ‘टेक ओभर’ गरेर आफैं दोस्रो भाग लेखिदिने रहेछन्, बिना जस । पछि तिनै फिल्म हिट हुन्थे ।
नेपाली फिल्मको स्वर्णिम महोत्सवका लागि यहाँ आएका गोविन्दा यतिबेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि नयाँ सोच, प्रविधिमा परिवर्तन आइरहेको ठान्छन् । भन्छन्, ‘नेपाली फिल्मको लुक्स यति धेरै बदलिएको छ कि लाग्छ, कुनै इंग्लिस पिक्चरजस्तो । हो, यही सही समयमा अब जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ ।’
उनले आफू नेपाल र भारतको सहकार्यमा फिल्म बनाउन चाहेको पनि खुलासा गरे । ‘कुनै समय हामी (नेपाल–भारत) ले कला, संस्कृति, भाषा, संगीतमार्फत् पूरा विश्वलाई डोमिनेट गरेका थियौं । अब फेरि साथ चल्नु जरुरी भएको छ । त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि दुई देशको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:५४